Hupenyu hunoshamisa 2: yakaburitswa yeGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Hupenyu hunoshamisa 2: yakaburitswa yeGNU / Linux
Nyika yekutamba paGNU / Linux inoramba ichienderera mberi zvishoma nezvishoma. Upenyu Hwakasimba 2 ndeimwe yemazita makuru akasunungurwa eLinux neMac izvozvi. Kutenda kune vanogadzira paDONTNOD Varaidzo, inotsigirwa naFeral Interactive. Aya ndiwo maitirwo akaitwa chiteshi chitsva chemutambo uyu wevhidhiyo, icho chakatove chakabudirira pane mamwe mapuratifomu icho chaive chiripo panguva ino.
Unogona kutenga kubva kune akasiyana online vhidhiyo mutambo zvitoro, senge Feral Chitoro pachayo, asi zvakare mune vamwe vakaita seHumble Store kana mune yatinofarira Valve Steam. Uye zvakare, mune iyo Steam chitoro ine 75% dhisikaundi nhasi. Saka chimbidza uye utenge isati yatengesa kana iwe uchifarira kuyedza kuti sei zita iri richitaurwa nezvaro.
Une iko mukati Yakazara Mwaka, iine zvikamu zvishanu zvizere kunakidzwa nezororo iri. Nyaya inonakidza kwazvo kuseri kweiri basa rekuvandudza uye kubva kwariri Ini ndataura pane zvinoverengeka zvinhu mumablog edu. Uye izvo ini ndagara ndichidzivirira kuti basa rekusimudzira rakanaka, uye ndosaka vateveri vazhinji veLinux vaida kwazvo kuti nhau idzi dzisimbiswe zviri pamutemo.
Imwe yenyaya dzakakurumbira kwazvo munyika yekutamba iyo inotaura mafambiro ehupenyu hwevaviri vayo protagonists. Izvi vatambi ndiDaniel naSean. Daniel anogara achidzidza kubva kuna Sean, uye zvese zvaanomudzidzisa zvine mhedzisiro inosvika muzviitiko zvemutambo wevhidhiyo. Kana iwe uchida kuziva magumo, ini handizo kuipamba, ndinokukoka kuti uzviwanire wega. Uye nenzira, ayo anoonekwa mhedzisiro, yekupenda-ruoko zvigadzirwa, yekutanga kurira kurira inoenda nayo, uye isingaperi nhamba yezvinhu izvo vashanduri vayo vakashanda zvinoonekerawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Hupenyu hunoshamisa 2: yakaburitswa yeGNU / Linux
Iyo nyowani vhezheni yeSUSE Linux Enterprise 12 SP5 yaburitswa
Facebook haichadi kutsamira pane android uye yayo inoshanda system yatove mukuvandudza